Tofu sy kariolà misy kari | Bezzia
Tofu sy kariolà voninkazo misy vary
Maria vazquez | 06/04/2021 10:00 | Salady sy legioma
Any Bezzia isan'andro mandalo dia tianay kokoa ny curry, mitovy aminao ve no mitranga? Ny kariva akoho sy ovy izay nozarainay taminay hatramin'ny telo taona lasa izay dia iray amin'ireo ankafizinay ary niantehitra taminay izahay hamorona izany kinova vegan: curry tofu sy cauliflower.
Ny akoho dia nosoloin'ity tofu ity amin'ny alàlan'ny tofu sy legioma hafa ankoatry ny ovy mamy nampidirina ao anaty recette. Amin'ity fomba fahandro ity kari tsy misy manaloka azy. Tamin'ity indray mitoraka ity izahay dia tsy nanampy voatabia na zavatra hafa manova ny lokony na ny tsirony.
Ny anio dia sakafo matanjaka sy feno, tonga lafatra mba hatao lovia tokana. Tsotra ny fanomanana azy ary tsy hitondra anao mihoatra ny 40 minitra. Ny torohevitra omeko anao dia araraoty ary araraoty mandritra ny roa andro. Azonao atao ny mihinana azy indray andro miaraka amin'ny vary ary misakafo hariva ny ampitso ary mitovy ny vidiny aminao. Sahinao ve ny manandrana azy?
1 Akora ho an'ny 3
Akora ho an'ny 3
Menaka oliva virjiny 2 sotro fihinanana
Tongolo voatetika 1
1/4 dipoavatra lakolosy mena, voatetika
Kaolifera 1/2, anaty florets
Ovy mamy 1, diced
350 ml. voaniho
Vovoka curry 2 sotrokely
Paprika mamy 1 sotrokely
1/3 sotrokely komina voatoto
Vovon-katsaka 1 sotrokely levona anaty rano 1/2 vera
Vary masaka 1 kapoaka
Omano ny fangaro rehetra.
Afanaina ao anaty vilany ny menaka roa sotro fihinana amboary ny tofu efa zatra 8 minitra na mandra-pahazavana volontany. Vantany vao vita dia esory ny lapoaly ary tahirizo.
Amin'ny menaka iray ihany Endasina ny tongolo sy sakay ankehitriny mandritra ny 5 minitra.
Avy eo, Atsofohy ny ovy sy ny ovy, sarony ny kaserôla ary avelao izy ireo hahandro amin'ny hafanana antonony mandritra ny 8-10 minitra.
Aorian'ny 10 minitra ampio ny ronono voanio, zava-manitra, vovo-katsaka ary afangaro. Andrahoy mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ny iray manontolo na mandra-pitombon'ny ovy.
Aroso miaraka amin'ny vary masaka ny tofu sy ny karipetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Salady sy legioma » Tofu sy kariolà voninkazo misy vary
Mpanamboatra kafe mitete manual sy tsara tarehy